Walaac badan ma jiro. Khabiirka fudud wuxuu yaqaanaa sida loola dagaallamo gawaadhida gawaarida Isticmaalka Google Analytics
Xogta cad iyo xogta waxay muujineysaa wax badan marka ay timaado suuq geynta internetka. Helitaanka xogta iyo tirakoobyada bilaashka ah ee gaadiidka aan loo baahneyn, gaadiidka baaskiilka, iyo bini'aadmiga ayaa ka tarjumaya xirfadaha iyo xirfadlaha loo isticmaalo in lagu hayo bogga. Toddobaadyadii la soo dhaafay, ganacsatada B2B iyo ururrada yaryar ayaa la kulmay caqabadda ah in laga reebo gaadiidka baaskiilada iyo taraafikada gudaha ee warbixintooda.
Nasiib wanaag, Google Analytics waxay u yimaadeen gargaarkooda ka dib markii ay soo bandhigeen farsamooyin farsamayn oo waxtar leh oo isticmaalaya doorsoomayaasha iyo macluumaadka dadka isticmaala si looga saaro taraafikada aan loo baahnayn ee ka soo jeeda garaadka iyo caarada - online linie 129 logo maker. Joogitaanka fayraska Trojan, nacaybka, iyo boodhka baabuurta bakhaarada ayaa joojiya xogta dadka isticmaala macluumaadka Google Analytics qaab aad u weyn.
Maamulaha Guusha Macaamiilka Semt , Andrew Dyhan, wuxuu qeexayaa sababta ay u kala duwantahay gaadiidka dhabta ah ee baaskiilada iyo gaadiidka gudaha in uu yahay mid aad muhiim u ah marka la gaaro suuq geynta internetka
Saameynta Dhibaatooyinka iyo Xakamaynta ku Saabsan Tirakoobkaada
dhawaan, Google ayaa cusboonaysiin muhiim ah u sameeyay Google Analytics. Xogta waxay ka dhigeysaa mid sahlan in suuqyadu ay ka saarto caarada iyo qaanadaha warbixinnada iyo tirakoobyadaada. Helitaanka gaadiidka gudaha iyo kan baaskiilka ayaa si xun u saameynaya xogtaada ku jira xakamaynta webka iyo makiinadaha raadinta.
wuxuu u shaqeeyaa inuu fayl-gareeyo faylasha diiwaanka khatarta ah, fayraska trojan, calaamadaha loo yaqaan 'trojan', caanaha loo yaqaan 'cump', iyo naqshadayaasha Nasiib darro, noocyada kale ee gaadiidka ay abuuraan fursadaha xunxunku waxay saameyn ku yeelan karaan goobtaada. iyo caarada waxay ka dhigan tahay in ka badan seddex meelood oo ka mid ah gaadiidka internetka ka hor intaan laga saarin taraafikada goobtaada, tixgeli in aad hubinayso magaca martida ee baabuurta si aad uga fogaato ka saarida gaadiidka dhabta ah
Qaadashada IAB ee Bots iyo Spiders
Interactive Advertising Bureau, oo ah shirkad caalami ah oo awood u siinaysa suuq-geynta suuq-geynta in ay ku soo korodho warshadaha, ayaa sidoo kale ku dooday baahida loo qabo in la xakameeyo kabaha iyo xakamaynta raqamka dhabta ah. Xafiisku wuxuu ka kooban yahay 'Spiderers and List Bots', liiska ku sharraxaya dhammaan qaababka iyo noocyada dhererka iyo caarooyinka saameeya gawaarida dhabta ah ee suuqa suuqgeynta. Liiskaaga si aad u shaqeyn kartid, waa inaad bil kasta cusbooneysiisaa
Sanadle ah, suuqyada iyo milkiilayaasha ganacsatada internetka waxay bixiyaan celcelis ahaan khidmadda $ 7,000. Khidmadu waa kala duwan tahay iyadoo ku xiran haddi ay macmiilku u qorneyd xubinimada IAB. Ka dib markii uu ku biiray IAB, Google Analytics wuxuu bilaabmayaa inuu xaddido warbixinnadaada iyo xogtaada adigoo samaynaya isbarbardhiga guud ee caanaha loo yaqaan iyo caarada iyo boggaaga hits. Ka hor inta aan la soo bandhigin warbixintan, Google, shirkadaha, iyo ururadu waxay sameeyeen shaandhayn gacanta ah, halkan qaar ka mid ah boodhada la yaqaan iyo caarada waxay maareynayaan helitaanka xogtaada iyo warbixinnadaada
Inaad ka fogaato qulqulatooyinka iyo caarada ka jirta taraafikadaada, fur 'Your View Settings' iyo inaad awood u hesho inaad bilowdo. Isku dhaji fursadaha la soo bandhigay illaa bogga hoose, oo karti u yeelo boodhka. Iyadoo ku xiran barta internetka, lambaradaaga taraafikadu waxay billaabayaan inay noqdaan tiro dhab ah. Xitaa haddii nambarka uu ka kooban yahay gaadiidka been abuurka ah sida gaadiidka gudaha, gawaarida la yaqaan iyo caarada tareenka ayaa laga reebayaa tirakoobyadaada. Guusha ganacsigaaga internetka waxaa go'aaminaya dadaalka lagu go'aamiyay himilooyinkaaga. Iska diiwaan gali xubinimada IAB oo laga saaro caarooyinka iyo khaanadaha saamaynaya warbixintaada